Qoysas Soomaali ah oo ku go'doonsan gobolka Oromada - Halbeeg News
Qoysas Soomaali ah oo ku go’doonsan gobolka Oromada
JIGJIGA (HALBEEG) – Tobannaan qoys oo Soomaali ah ayaa ku go’doonsan magaalada Balballayti oo ka tirsan Ismaamulka Oromada ee dalka Itoobiya. Qoysaskan ayaa loo geystey jirdil iyo dhac iyagoo sidoo kale loo diiday in ay magaaladaas isaga baxaan.
Nin kamid ah dadkaas oo sababo ammaan dartood magaciisa u qariyey, ayaa laanta Afka Soomaaliga ee BBC u sheegay, in qoysaska Soomaalidu cabsi joogta ah iyo xorriyad la’aan ku nool yihiin iyagoo aan awood u lahayn in ay beerahooda tabcadaan amase xoolahooda raacdaan.
Ninkaas ayaa sidoo kale sheegay in qoysasku labo maalmood kahor isku dayeen inay magaalada isaga guuraan, balse dib loo soo celiyey kaddibna qaar kamid ah dadkaas laga dhacay wixii ay hanti wateen qaarna jir dil loo gaystey.
Dadka dhaawacyada la gaarsiiyey oo ay dumar iyo dad waayeel ahi ku jiraan, waxaa afar kamid ah gaaray nabarro culus oo madaxa kaga dhacay iyo waliba jabniin gacmaha ah.
Qoysaska Soomaalida ee ku go’doonsan magaalada Balballayti ee gobolka Oromada, ayaa madaxda Dowladda Deegaanka Soomaalida iyo Dowladda Dhexe ee Itoobiya ka codsaday in si deg deg ah loogu soo gurmado.
Colaadda isirka ku salaysan ee ka dhex aloosan qowmiyadaha dalka Itoobiya, waxay u muuqataa mid marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa, iyadoo toddobaadkan horraantiisii rabshado ka dhacay duleedka Addis Ababa, lagu dilay dad tiradoodu 20 qof kor u dhaafayso.
Tobannaan qof oo Soomaali ah oo dumar iyo caruuri ku jireen ayaa sannadkii hore ee 2017 dabayaaqadiisii lagu laayey isla deegaanka Balballayti.
Guddoomiyihii hore ee Nairobi oo mar labaad xabsiga loo taxaabay